त्यसपछि ऊ फर्किएन | ...Yadharu
That can not be forgotten
Home > यादहरु	> त्यसपछि ऊ फर्किएन
त्यसपछि ऊ फर्किएन
August 21, 2012 Dilli Malla	Leaveacomment Go to comments
ढल्यो ऊ ।
अहँ ऊ फेरि बोलेन, हाँसेन अनि कतै देखिएन- जनसेनाका लस्करहरुमा, मान्छेहरुका माझमा ।
अहँ ऊ कतै देखिएन । साँच्ची ! त्यसपछि उसको भौतिक अस्तित्व न त कसैले भेट्यो न त उसले अरु कसैलाई भेटेको खबर नै सुनियो ।
त्यसपछि ऊ फर्किएन ।
आज फेरि उसको यादले पिरोलिरहेछ । जति ओरालो झर्दै जान्छु, मनमथिङ्गलमा खाली उसकै विम्ब नाचिरहेछ । सिस्नेबाट बहेको चिसो सिरेटोले मुटुसम्म छोएर फर्कन्छ । कता–कता जाडोले हिउँदयामको आभाष दिन्छ । पारि डाँडामा अब थोरै मात्र घाम बाँकी छ । नीलगगनमा स–साना बादलका धर्साहरु बथान हराएका मालचरीझैं हावाको वेगमा यताउति उडिरहेछन् । सन्ध्याकालीन घामको मधुरो प्रकाशले बादलका धर्साहरु पनि राता–राता देखिन्छन् ।
म अझैं ओरालो झरिरहेछु । ओरालो झराईसँगै स्मृतिका पानाहरु उकालो चढिरहेछन्,– मेरो मथिङ्गलमा ।
बर्षामास स्कुल बिदाताका म उसकै घर तल कल्याणी खोलातिर घाँस काट्न जान्थे । घाँस काट्ने वर्कतभन्दा रहर बढी हुन्थ्यो त्यो बेला । उ घाँसको भारी बनाएर मलाई बोकाइदिन्थ्यो । म ठसठसी कन्दै उकालो लाग्थे । दिउँसो ग्वाला जाँदा गाईबाख्रा भीरमा लगाइदिन्थ्यौं र डाँडोमा दिनभरि डण्डीवियो खेलेर बिताउँथ्यौं । कहिलेकाँही त गाइबाख्राले बालीनाली मासी सक्दा पनि हामी खेलिरहेका हुन्थ्यौं ।
बर्षामास कल्याणी खोलामा पानीको ठूलो मुल फुट्थ्यो । हामी घाँस काट्न जाँदा घट्ट बनाउँथ्यौं । हिउँदमासतिर कहिले मछैनी गैरा, कहिले कल्याणी खोला त कहिले सिम्लेनीसम्म पुग्थ्यौं– तरुल खन्न । बालापनमा उसँग यो भन्दा बढी खेल्न पाइएन ।
समयले कोल्टे फेरिसकेछ । धेरै पछि आज बालापनको याद आयो । ‘ऊ अब छैन’ यत्ति सम्झदा पनि जीउ सिरिङ्ग हुन्छ, मन चरक्क चिरिन्छ । उसको यादले झन्–झन् सताउँदैछ आज । म पहिलोपटक त्यहाँ पुग्दैछु, जहाँ उसले रगत बगायो क्रान्तिका लागि, जहाँ उसले आँखा चिम्लियो संसार देखाउनका लागि …..। हो– म त्यही जाँदैछु– जहाँ ऊ ऐया भन्न पनि नपाई ढलेको थियो युद्धमोर्चामा ।
जंगलको बाटो हुँदै कुइनेटो पार गरेर डाँडोमा पुग्दा एउटा सुन्दर दृश्यले आँखा घचघच्यायो । डाँडामा बसेर एकछिन त्यो रमणीय संसारलाई नियाल्न थालेँ । वरिपरि अग्ला–अग्ला पहाडहरुले घेरिएको त्यो सानो बस्ती । कोही ढुङ्गाले त कोही खरले छाएका घरहरु, पहाडको फेदमा थपक्क बसेका गाउँ ! साना–साना कान्ला र गरा–गरा परेका खेतहरु, तल सानी भेरी अविरल बगिरहेछ । जलजलाको काखबाट निस्केको दोमै खोला पनि यही मिसिन आउँदो रहेछ । गाउँको पुर्वपट्टि एउटा सानो डाँडो देखिन्छ, डाँडाको मुन्तिर ठूलो जलाशय ! जलाशयमा हाँस बकुल्ला र जलेवाहरु विचरण गरिरहेछन् । छेउछाउमा काला–काला कमलका डाँठहरु पनि देखिन्छन् । अचेल हिउँदयाम प¥यो क्यारे । वर्षायाममा त कमल फुलेर जलाशय रातै हुन्छ रे । कमल फुल्ने भएकोले नै होला सबैले ‘कमल दह’ भन्दारहेछन् त्यो जलाशयलाई ।
कसैले भन्यो– ‘ऊ त्यही डाँडोमा थियो पुलिस चौकी ।’
मैले उत्सुकतापूर्वक आँखा दौडाए । त्यहाँ कुनै पनि चौकीको अवशेष थिएन मात्र नाङ्गो डाँडो देखिन्थ्यो । घोरिएर त्यही डाँडोमा हेरिरहें । मनमथिङ्गलमा कैयन् तरंगहरु उठ्न थाले– मन्द सागरमा भयानक ज्वारभाटा उर्लेजस्तो न शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानेजस्तो । ख्वै कस्तो–कस्तो । डाँडालाई हेर्दाहेर्दै आँखा धमिला भए । चारैतिर कालो–कालो मात्रै भयो । बिस्तारै आँखाको ढकनी खोले डाँडो त्यही थियो जस्ताको तस्तै ।
एउटा विगत फेरि वर्तमान बनेर उभियो ।
ऊ मेरो अघि–अघि लामा–लामा पाइला फाल्दै सल्लेरी पाखाको उकालोमा लम्किरहेछ । म बेलाबेलामा दौड्छु उसलाई भेट्टाउन । ऊ मुसुक्क हाँस्छ, मलाई दौडेको देखेर । हाँस्दा उसका चम्किला दाँतहरु टलक्क टल्किन्छन् । एउटा ठूलो फौजी झोला बोकेको छ उसले । कम्मरमा खुकुरी, काँधमा बन्दुक, बन्दुकको नालमा कपडाले बुजो लगाएको छ । टाउकोमा रातो ताराअंकित टोपी लगाएको छ । भोटो हरियो, टाटेपाटे र पाइन्ट पनि त्यस्तै । हामी दुवै चुपचाप हिडिरहेछौं ।
‘हैरानी त परेन ?’ – उसले मौनता भंग ग¥यो ।
म हस्याङफस्याङ गर्दै दौडिएको थिएँ, पसिना छुटेको थियो, सास बढेको थियो । मुुस्किलले यतिमात्र भने – ‘नाई छैन ।’
ऊ फिस्स हाँस्यो मात्र ।
उसको गाजले आँखामा सहानुभूतिका रेखाहरु प्रष्ट देखिन्थे ।
जब खुट्टामा ठेस लाग्यो अनि पो म निन्द्राबाट व्यूँझिएजस्तो भएँ । हिड्दा हिड्दै बालापनको यादमा हराउन थालिसकेको रहेछु ।
गाउँ झरिसक्दा सूर्य हराइसकेको थियो पृथ्वीको गर्भमा । वरिपरिका पहाडहरु काला–कालामात्रै देखिन्थे– अजंगका ढिस्काजस्तै । झ्याउँकीरीको संगीत शुरु भइसकेको थियो । ताराहरुको चमकले धुमिल प्रकाश फिजिसकेको थियो रुकुमकोटमा । सानी भेरीको सुसाई र कुकुरको भुकाइले शान्त रातमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाइरहेका थिए ।
रात बितिरहेछ, बढिरहेछ– अन्धकार र निस्तब्धता चारैतिर । झ्यालबाट उही डाँडातिर आँखा पु¥याए– जहाँ ऊ ढलेको थियो कुनै दिन । के देखिन्थ्यो र मध्यरातमा– मात्र कालो ढिस्को देखिन्छ । त्यही कालो ढिस्कातिरै हेरेर टोलाउँछु– कता–कता गोलाबारीको आवाज आएजस्तो, कोही चिच्याएजस्तो लाग्छ । अलि गहिरिएर सुन्न खोज्छु, अहँ केही पनि सुनिदैन– सानी भेरीको एकोहोरो सुसाइबाहेक ।
एउटा उराठ स्वरले रातै खलबल्यायो । नजिकै पीपलको रुखमा पखेटा भ्याटभ्याट पार्दै लाटोकोसेरो उलुलुलु करायो । कता–कता दन्त्यकथाका नेत्रलाल र कर्णकान्तको याद आयो । ऊ पनि कतै कर्णकान्तझैं लमक–लमक गर्दै आइदिए…। एउटा अव्यक्त चाहनाले भित्रैदेखि कोतरेर ल्यायो । जूनको प्रकाशमा टल्किरहेको गोरेटोको ढुङ्गातिर नियालें । साँच्ची ! त्यहाँ त मान्छेरुपी आकृति बिस्तारै हिड्न पो थाल्यो । पदचापहरुको स¥याकसुरुक ! अलि घोरिए । टाउको झट्कारें– अहँ सब असम्भव, सब भ्रम ! यो त मेरो दृष्टिभ्रममात्र रहेछ ।
अँ, साँच्ची ! ऊ कति निष्ठावान् मान्छे थियो– कति धैर्यवान, कति कठोर अनि कति मायालु पनि । दुःख र पीडाको आरनमा पोलिएर स्पातजस्तै बनेको मान्छे ! म उसलाई पढ्दै जान्छु– उसका जीवनका हरेक पानाहरु । ओहो ! कति पीडादायी चित्कारहरु भेटिन्छन् त्यहाँ ! कति जलिरहेका मनहरुको अठोट छ । अहँ ऊ कत्ति पनि रोएन उसको घरगोठ जलाइदा ! कति पनि विचलित भएन सरकारको नून खाएका वैरीहरुले भाइलाई ज्यूँदै आगोमा पोलेर मार्दा ! बैनी र आमालाई सँगसँगै बलात्कार गर्दा…. अहँ, ऊ कत्ति पनि विचलित भएन । बरु बन्दुक बोकेर हिड्यो ऊ वर्गवैरीका विरुद्ध लड्न– डुब्नै लागेका घामजस्ता बाआमाको आँसुले छेक्दा छेक्दै पनि ।
बाँकी रात ख्वैं कसरी बित्यो ? आफैलाई थाहा भएन ।
सम्मुखमा छ उही सानो डाँडो– जहाँ ऊ ढलेको थियो ।
जानु छ मलाई ऊ ढलेको त्यही माटो चुम्न । तर, आफैआफ डराइरहेछु म ।
माथि उक्लन खोज्छु गोडा फत्रक्क गल्छन्– फेरि थचक्क बस्छु । हुन त ठूलो उकालो छैन, सानो ढिस्को न हो । तर, कोशौं कोश टोपी खस्ने उकालो चढिरहेझैं लाग्छ । मुटुको ढुकढुकी बढिरहेछ । पाइला–पाइलामा उसको मृत्युले झस्काउँछ ।
‘के ऊ मरेकै हो त ?’ एउटा प्रश्नले घचघच्यायो ।
‘अहँ ऊ मरेको छैन । मृत्युको परिभाषा बदलिसकेको छ । ऊ त सधैं–सधैंलाई बाँचेको छ, बाँचेर पनि पलपल मरिरहेकाहरुको भीडमा ऊ मरेर पनि बाँचिरहेको छ ।’ कहिलेकाँही जीवन मर्दोरहेछ, मृत्यु पनि बाँच्दोरहेछ । त्यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै छन् । अहँ ऊ त्यस्तो उदाहरण हैन ।
म अझैं अलि माथि पुग्दैछु । कता–कता भावनाका तरंगहरु हलचल गर्न थाल्छन् । मुटुको धड्कन झन्–झन् बढ्दैछ । लाग्छ, ऊ कतै चिहानबाट उठेर मलाई अठ्याउन त आउँदैन ? बढ्दै जाँदा अगाडि एउटा भत्किएको गारो आँखामा प¥यो । मेरो शरीर आफैआफ जिरिङ्ग भयो । जीउभरि काँडा उम्रिए ।
हो, ऊ यही ढलेको थियो । शत्रु पक्षको बन्दुकको मोहरीबाट छुटेको गोलीले उसको छाती दागेको थियो यहीको मोर्चामा ।
चैत्र १९ को रात– ड्याम ! पटटट चुइय ढ्याम्म ! ….. ठोक ! ठोक……. । ओहो ! दोमैखोलाको सुस्साहटभन्दा कयौं भयानक र डरलाग्दो थियो बमगोलाको आवाज । यही भूमि थियो, यही डाँडा थियो त्यो ऐतिहासिक रणसंग्राम भएको रात । वीरता र विजयको रातो इतिहास लेखिएको ०५७ चैत्र १९ को त्यो रात । कहिल्यै नफर्किने गरी ऊ ढलेको त्यो रात ।
ऊ कतै बोलिरहेझैं लाग्छ । यताउति दौडिन्छु, तलमाथि, वरपर भत्किएका गाराहरु, बंकर र सुरुङका मेटिनै लागेका अवशेषहरु देखिन्छन् । अलि पर टाकुरामा पुगेर तलतिर नियाल्छु– दोमैखोला उर्लिरहेछ । अलि तलबाट सानी भेरी बगिरहेछ । कता–कता मन चोइटिन थाल्छ । छाती चिरा–चिरा हुन्छ । अहँ ऊ कतै छैन । अब ऊ कतै भेटिने छैन । हाँस्दै गाजले आँखामा मुस्कान छोडेर हात मिलाउन आउने पनि छैन । साँच्ची ! अब ऊ मानव आकृतिमा कहिल्यै देखिने छैन ।
आखिर यस्तो किन हुन्छ ? एउटा प्रश्न सलबलायो ।
वास्तविकता यस्तै छ । जीवित प्राणीको नाताले वास्तविकता स्वीकार गर्नैपर्दछ । उसलाई गुमाइयो यो युद्धको तीतो यथार्थता हो । यदि कोही यथार्थताभन्दा टाढा भाग्न खोज्छ भने त्यो कायरता हो । जीवन अन्त्यष्टिको बाटो हो ।
खैर, आज ऊ रहेन तर उसको स्मृति बाँचिरहेको छ, एउटा मृत मानवको जीउँदो मानवता लाखौंलाख जीवित मानवहरुको छातीमा सलबलाइरहेछ । आकाशतिर हेर्छु आज बाजहरु छैनन् । खुल्ला आकाशको उन्मुक्त परिवेशमा एक हुल चराहरु कराउँदै पश्चिम पहाडतिर उड्छन् । क्षितिजबाट स्वतन्त्रताका वेलुनहरु विजयको सन्देश फिजाउँदै नीलगगनतिर बेगिदैछन् । मेरा पदचापहरु एकाएक चल्न थालेछन् । त्यो भत्किएको गारो, सिस्नो र खरले पुरिएको भग्नावशेषभन्दा केही तल पुगिसकेछु । समय छाम्ने चेष्टा गरे, सूर्य डुब्नै थालेछ । माथि डाँडामा थोरै मात्र रातो घाम बाँकी थियो ।
आफ्नै कुरा (साताको ब्लगर : मेरोरिपोर्टबाट) फेरि स्कूले भइयो
an Apprentice Writer & Journalist, who walking Slowly Slowly.
पुरण क्षेत्रीको गीत `खेलाडी हौं खेलाडी हामी खेलाडी´को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक ! youtu.be/_KY2zWU6nus3hours ago
RT @KrishnaBMahara: मगर भाषा साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान दाङले आज घोराहीमा आयोजना गरेको मगरात साँस्कृतिक भेषभुषा प्रतियोगितामा सहभागी… 1 week ago
RT @KrishnaBMahara: सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अायोजनामा अाजदेखि धनगढी रंगशालामा शुरू भएको `प्रथम मुख्यमन्त्री कप अन्तर… 1 week ago
दोभासे (अंग्रेजीलाई नेपालीमा रुपान्तर)
राप्ती ग्लोबल पेज
हिम्मत बराल मगर
क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, दाङ
मदानी साहित्य समूह, नेपाल
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय
आस्था केसीको 'sabdashikhaa'
उदय जीएमको ‘मेरो नेपाल’
कला अनुरागीको ब्लग
खेमराज गाउँलेको ‘गाउँले मन’
चन्द्र जीएमको 'माडी हुङ्ग्री'
जनक नेपालीको सुस्केरा
दिपक भट्टराईको कलियुग
दूरसञ्चार डट कम
देविका जीएमको 'खुसीको संसार'
नविन लोचनको ब्लग
नवीन विभासको 'हटारु'
पाण्डव शर्माको ब्लग
प्रमिला देवकोटाको डुलुवाकेटी
महेन्द्र महकको ‘मेरो साहित्य’
मोहन मैनालीको ब्लग
रमेश मल्लको ब्लग
सहिद नेत्रलाल अभागी
सुदीप गौतमको ब्लग
कविता कोश (हिन्दी)
नयाँ युगबोध दैनिक 'सौगात'
चलचित्र उमा : वास्तविक छापामारहरुको अपमान
बिर्सिएका छैनन् सहकर्मीहरु सेनलाई
दहितान ढेंकी ! चम्पीको बिहे रोकिदिनू है
सतिसालजस्तै जनकवि नेत्रलाल
नमूना गाउँकी नमुना
बेपत्ता कहिलेसम्म ?
krishna raj Chaudhar… on आफ्नै कुरा (साताको ब्लगर :…
Dilli Malla on जूनताराहरु पनि रोएको जुनेली…
majgaiya on जूनताराहरु पनि रोएको जुनेली…
ajay sharma on सतिसालजस्तै जनकवि नेत्रलाल